Halima Osman | KWIT
Newsreader and Translator
Somali News 05.14.21
By Halima Osman • May 14, 2021
Magaalada Sioux City waxay leedahay ka dib tilmaamtii ugu dambaysay ee ay wadaagaan Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada, waji-shareerka iyo wejiga daboolida kahortaga mar dambe looma baahna dhismayaasha Magaalada haddii aad si buuxda uga tallaashay COVID-19. Maaskarada ayaa weli looga baahan yahay Sioux Gateway Airport, basaska Transit-ka City iyo Xarunta Gaadiidka ee Martin Luther King. Maaskarada ayaa weli lagu dhiirrigeliyaa tas-hiilaadka Magaalada marka kala fogaynta bulshada aysan macquul ahayn.
Somali News 05.13.21
By Halima Osman • May 13, 2021
The Centers for Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada maanta waxaa fududaysay hanuun maaskaro-xiran gudaha loogu talagalay dadka si buuxda tallaalo, ogolaanayo in ay si nabad ah u joojiyaan xidhaan gudaha meelaha ugu.
Tilmaanta cusubi waxay wali ku baaqeysaa in la xirto waji-furka meelaha dadku ku badan yahay sida basaska, diyaaradaha, isbitaalada, xabsiyada, iyo hoyga hoylaawayaasha ah, laakiin waxay yareyn kartaa xayiraadaha dib u furaya goobaha shaqada iyo iskuulada.
Guddoomiyaha Gobolka Kim Reynolds ayaa difaacaya go'aankeeda ah in la joojiyo dheefaha shaqo la'aanta ee federaalka
Reynolds iyo kooxaha ganacsiga ayaa sheegaya in lacagaha dheeriga ah ee la siinayo dadka shaqo la’aanta ah ee Iowans ay ka celineyso inay qaataan shaqooyin cusub xilli ganacsatadu aysan heli karin shaqaale ku filan.
Somali News 05.11.21
By Halima Osman • May 11, 2021
Gudoomiyaha gobolka Kim Reynolds ayaa sheegay in Iowa ay ku biiri doonto koox ka mid ah gobolada ay hogaamiso jamhuuriyada ee soo afjaraya barnaamijyada federaalka ee la xiriira masiiboyinka faa iidada u siiya shaqaalaha bilaa shaqada ah.
Reynolds waxay sheegaysaa in gobolku joojin doono kobcinta federaalka, oo ay kujirto lacago dheeraad ah oo $ 300 usbuucii ah shaqo la'aan.
Reynolds waxay tiri faa iidooyinka ayaa dadka ka celinaya inay shaqada ku soo noqdaan waxayna caqabad ku yihiin dhaqaalaha gobolka.
Faa'iidooyinka waxay dhammaan doonaan Juun 12.
Somali News 05.10.21
By Halima Osman • May 10, 2021
Tirada kiisaska COVID-19 ayaa kusii dhacaya dhammaan saddexda Gobol ee Siouxland.
Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa ma aysan soo bandhigin dhimasho cusub iyo qiyaastii 100 kiis oo cusub gobolka oo dhan Isniintii. Ma jirin kiisas cusub oo ah COVID-19 degmada Woodbury.
Heerka waxtarka ee 14-maalmood ee Gobolka Woodbury waa 3.3%, boqolkiiba-bar ayaa ka hooseeya heerka gobolka oo dhan. Sideed bukaan ayaa lagula tacaalayaa cudurka cusub ee coronavirus-ka ee magaalada Sioux. Sicirka saamaynta ee ku dhowaad 3%. Nebraska waxay aragtaa celcelis ahaan 186 xaaladood maalintii.
Somali News 05.07.21
By Halima Osman • May 7, 2021
Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa waxay ku dartay 18 dhimasho dheeraad ah sababo la xiriira dhibaatooyinka COVID-19, iyo ku dhowaad 400 oo kiisas cusub oo seddex ka mid ah laga helay Gobolka Woodbury. Tirada dhimashada iyo kiisaska waxaa laga yaabaa inaysan dhicin 24-kii saacadood ee la soo dhaafay maaddaama gobolku ku darsaday macluumaad taariikh leh. Waqtigaan la joogo waxaa jira ku dhowaad 190 qof oo isbitaalka la dhigay oo qaba fayraska iyadoo shan bukaan lagu daweynayo magaalada Sioux.
Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa waxay ku dartay laba dhimasho oo dheeraad ah sababo la xiriira dhibaatooyinka COVID-19 muddo 24 saacadood gudahood ah. Waxaa jiray in kabadan 700 oo kiis oo cusub oo 15 kamid ah lagahelay Degmada Woodbury. Heerka waxtarka deegaanka waa 3.8%, waxyar ka hooseeya celceliska gobolka oo dhan.
Somali News: 05.06.21
By Halima Osman • May 6, 2021
Golaha guurtida ee Iowa ayaa meel mariyay sharci ka mamnuucaya gobalada iyo dowladaha hoose inay soo saaraan kaararka aqoonsiga ee sheegaya in qof uu qaatay tallaalka COVID-19 iyo in kale. Qiyaasta hadda waxay u socotaa Guddoomiyaha Gobolka Kim Reynolds si ay u saxiixdo.
Somali News 05.04.21
By Halima Osman • May 4, 2021
Saraakiisha caafimaadka ee gobolka ayaa xaqiijiyay laba xaaladood oo ah nooc ka mid ah COVID-19, oo inta badan loo yaqaan kala duwanaanshaha Hindiya, ee Iowa.
Kiisaska waxaa lagu ogaaday laba qof oo qaangaar ah oo ku nool koonfur-bari Iowa.
Saraakiisha ayaa sheegaya inay wali baranayaan astaamaha culeyska. Laakiin waxay yiraahdaan ma jiraan wax caddeyn ah in si fudud loo kala qaado ama ay u badan tahay inuu keeno cudur daran.
Somali News 05.03.21
By Halima Osman • May 3, 2021
Booliska magaalada Sioux City ayaa sheegay in labo qof loo xiray laguna eedeeyay dilka nin la toogtay ka dib markii uu u soo gurmaday saaxiibtiis oo la weerarayay.
22-sano jir Martez Harrison, oo ka tirsan magaalada Sioux City, ayaa dhintay ka dib markii lagu toogtay agagaarka 1-dii subaxnimo ee Sabtida banaanka baar Uncle Dave ee West Third Street.
Somali News 05.01.21
By Halima Osman • May 1, 2021
Waaxda Booliska Magaalada Sioux ayaa sheegtay in tuhmane dil-ismiidaamin ah uu galaaftay nolosha lamaane Sioux City ah shalay.
Baarayaasha ayaa sheegaya in cadeymaha goobta ka muuqda ay muujinayaan Nicholas Socknat inuu masuul ka noqon karo dhimashada Kelli Socknat ka hor inta uusan is dilin.
Afhayeen wuxuu yiri haddii qof uu la kulmayo rabshad guri, wuxuu la xiriiri karaa waaxda booliska ama SafePlace, oo horay loo oran jiray Golaha Ku Saabsan Weerarka Galmada iyo Rabshadaha Qoyska.
Somali News 04.29.21
By Halima Osman • Apr 29, 2021
Waaxda Magaalada Sioux waxay baareysaa dil ka dhacay agagaarka Dugsiga Hoose ee Morningside STEM. Saraakiisha ayaa helay nin iyo haweeney u dhinteen dhaawac ka soo gaadhay rasaastii ka dhacday guri u dhawaa. Dambi baarayaashu waxay rumeysan yihiin inay aqoonsadeen dhammaan dhinacyada ay khusayso oo aysan raadineynin cid looga shakisan yahay kiiska. Afhayeen ma uusan awoodin inuu xaqiijiyo in dhimashadu ay sababtay dil-ismiidaamin ah.
Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa waxay muujineysaa seddex dhimasho oo kale sababo la xiriira dhibaatooyinka COVID-19 iyo in ka badan 500 xaaladood oo cusub, oo ay ku jiraan toddobo kale oo ka tirsan Gobolka Woodbury. Tan iyo markii uu bilaabmay faafida in ka badan 15,000 oo ka tirsan dadka deegaanka Woodbury County ayaa laga baaray fayraska iyadoo ay dhinteen 224.
Heerka waxtarka tijaabada ee 14-maalmood ee Degmada Woodbury waa 4.1%, tani waxyar ayey ka sarreysaa heerka gobolka ee 4%.
Somali News 04.27.21
By Halima Osman • Apr 27, 2021
Degmada Dakota waxay ku dartay shan qof oo kale oo u dhinta COVID-19-kii shalay, taasoo wadarta wadarta ka dhigaysa 76. Gobolka Woqooyi-bari Nebraska wuxuu leeyahay 4,090 wadarta kiisaska fayraska iyo heerka toddobada maalmood ee soo noqnoqodka ee 3.75%, sida laga soo xigtay Waaxda Caafimaadka Degmada Dakota. Ma jiro degmooyin kale oo Siouxland ah oo soo sheegay dhimashooyin cusub oo la xiriira COVID-19 shalay.
Somali News 04.23.21
By Halima Osman • Apr 23, 2021
Gobolka Iowa wuxuu ku daray shan dhimasho oo dheeraad ah sababo la xiriira dhibaatooyinka COVID-19 iyo in ka badan 400 kiis oo cusub, oo ay ku jiraan 18 kale oo ka tirsan Gobolka Woodbury Jimcihii. In kabadan 5,900 oo reer Iowans ah ayaa u dhintey jirro darrada tan iyo markii uu bilowdey cudurkan faafa.
Siouxland District Health waxay qorsheyneysaa inay qabato rugaha talaalka saddexda dugsi sare ee Magaalada Sioux Arbacada.
By Halima Osman • Apr 22, 2021
Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa waxay diiwaangelisay lix dhimasho oo kale gobolka oo dhan sababo la xiriira dhibaatooyinka COVID-19 oo ay la socdaan ku dhowaad 500 xaaladood oo cusub, iyadoo 17 lagu daray Gobolka Woodbury muddo 24-saac ah.
Shalay ayaa la xusay sanad-guuradii koowaad ee dhimashadii ugu horreysay ee la xiriirta COVID-19 ee Degmada Woodbury. Qoraal lagu soo daabacay bogga Caafimaadka Degmada Siouxland ee Facebook ayaa lagu xasuustaa 221 qof oo ka mid ah dadka degmada oo naftooda ku waayey sanadkii la soo dhaafay.
Somali News 04.21.21
By Halima Osman • Apr 21, 2021
Gudoomiyaha South Dakota Kristi Noem ayaa saxiixay amar fulin ah oo mamnuucaya baasaboorada tallaalka COVID-19 ee gobolka.
Noem waxay tiri tan iyo bilowgii cudurka safka waxay ku kalsoon tahay Koonfurta Dakota inay gaaraan go'aanka ugu fiican naftooda iyo kuwa ay jecel yihiin.
Intii lagu guda jiray shir jaraa'id maanta, Guddoomiyaha Gobolka Iowa Kim Reynolds wuxuu si aad ah ugu dhiirrigeliyey dadka inay is tallaalaan.
Waxay tiri illaa iyo hadda 37% dadka reer Iowans 18 iyo wixii ka weyn ayaa helay tallaal.
Somali News 04.20.21
By Halima Osman • Apr 20, 2021
Caafimaadka Degmada Siouxland wuxuu ku dhawaaqay qorshayaasha rugta tallaalka ballaaran ee xigta Abriil 27-keeda Xarunta Siouxland Expo Center. Saacadaha rugtu waxay ku wajahan tahay dadka u baahan ballamo ka baxsan saacadaha shaqada caadiga ah.
Dadku waxay jadwal uga sameyn karaan khadka tooska ah iyagoo u maraya Caafimaadka Degmada Siouxland ama soo waca (712) 234-3922.
Somali News 04.16.21
By Halima Osman • Apr 16, 2021
Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa waxay ka warbixineysaa 13 dhimasho dheeraad ah oo COVID-19 ah iyo 468 kiis oo dheeri ah oo la xaqiijiyey. Degmada Woodbury maanta, waxaa jiray 11 kiis oo cusub oo laxiriira 19-kiis oo lagu daray wadarta tirakoobka. Waxaa jiray hal dhimasho oo dheeri ah oo lasoo tabiyay shalay, waxaana jiray 220 dhimasho la xiriirta coronavirus oo kutaala Degmada Woodbury.
By Halima Osman • Apr 15, 2021
Haweeneyda laga soo doorto deegaanka Iowa ee Congress-ka Cindy Axne ayaa sheegtay inay qalbigeeda jabisay markii ay maqashay Gov. Kim Reynolds oo diiday codsi ah in la aqbalo caruurta soo galootiga ah ee aan la wehelin Iowa.
Somali News 04.14.21
By Halima Osman • Apr 14, 2021
Xarunta Crittenton ee ku taal magaalada Sioux City waxay xireysaa hoyga gurmadka degdegga ah. Agaasimuhu wuxuu leeyahay arrimaha la xiriira COVID-19 ayaa door weyn ka qaatay go’aankaas. Hay’ada ayaa joojisay adeegyadii hoyga horaantii bishaan. Agaasimaha guud ee xarunta ayaa ku sheegay war-saxaafadeed uu maanta soo saaray in maqnaanshaha shaqaalaha ee la xiriira COVID iyo hoos u dhaca codsadayaasha cusub ay caqabad ku tahay socodsiinta xarunta.
Somali News 04.13.21
By Halima Osman • Apr 13, 2021
Saraakiisha caafimaadka dhammaan saddexda Siouxland waxay si kumeelgaar ah u joojiyeen isticmaalka tallaalka Johnson iyo Johnson, ka dib talooyinka CDC iyo FDA. Tallaabadan ayaa timid ka dib markii lix haween ah ay soo mareen xinjiro dhiig oo daran oo dhif ah, taasoo keentay hal dhimasho. Hal kiis ayaa laga helay Nebraska.
Somali News 04.12.21
By Halima Osman • Apr 12, 2021
Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa ayaa soo warisay inaysan jirin dhimasho cusub sababo la xiriira dhibaatooyinka COVID-19. Waxaa jiray 146 kiis oo cusub oo ay kujiraan afar kiis oo cusub oo kajira Degmada Woodbury mudo 24-saac ah.
Qof "xiriir la leh" Golaha Guurtida Iowa ayaa laga helay baaritaanka cudurka 'coronavirus'.
Tani waa tijaabadii sagaalaad ee togan oo si guud loo soo sheegay tan iyo markii kalfadhigii sharci dejinta uu biloowday Janaayo.
Maaskarada looma baahna Aqalka Gobolka Iowa.
Somali News 04.07.2021
By Halima Osman • Apr 7, 2021
Dowlada Iowa Kim Reynolds ayaa maanta warbixin ka siisay talaalka gobolka. Reynolds ayaa sheegay in ilaa hada 44% ee Iowans 18 iyo wixii ka weyn ay heleen ugu yaraan hal qiyaas oo ah tallaalka COVID-19. Heerku waa kudhowaad laba jibbaar kuwa 65 sano iyo ka weyn. Iowa waxay kujirtaa 9aad wadanka talaalada. Reynolds waxay tiri gobolku wuxuu qorsheynayaa inuu xooga saaro sidii loo heli lahaa talaalka kooxaha laga tirada badan yahay iyo ardayda jaamacadaha.
Somali News 04.06.2021
By Halima Osman • Apr 6, 2021
Taasi waa sida laga soo xigtay Waaxda Iowa ee Badbaadada Dadweynaha warbixinteeda sanadlaha ah ee ku saabsan dhacdooyinka xoogga Waxay ogaatay tuhmanayaasha in ay ku carareen gawaarida iyo lugta saraakiisha marar aad u badan sanadkii 2020.
Intaas waxaa sii dheer, saraakiishii waxay ku jawaabeen iyagoo sawiraya qoryahooda, qoryaha ay ridayaan iyo qoryahooda 269 jeer sanadkii 2020, boqolkiiba 83% waxay ka korodheen 2019.
By Halima Osman • Mar 31, 2021
Tallaallada COVID-19 ayaa usbuuca dambe u furmaya dhammaan saddexda gobol ee Siouxland.
Gobolka Nebraska wuxuu qorsheynayaa inuu u oggolaado qof kasta oo 18 sano ama ka weyn in la tallaalo laga bilaabo Isniinta, Abriil 5teeda.
Somali News: 03.30.2021
By Halima Osman • Mar 30, 2021
Dadka degan Degmada Woodbury ee 16 jir iyo wixii ka sareeya ayaa hada awooda inay isdiiwaangaliyaan talaalka coronavirus. Deganayaashu hadda way iska qori karaan xarumaha soo socda ee tallaalka COVID-19 ee lagu qaban doono Talaado, Abriil 6th, iyo Khamiista, Abriil 8th Xarunta Siouxland Expo Center. Waxaad iska diiwaan gelin kartaa khadka tooska ah ee Waaxda Caafimaadka Degmada Siouxland oo ah siouxlanddistricthealth.org
Somali News: 03.29.2021
By Halima Osman • Mar 29, 2021
Dadka degan Degmada Woodbury waxay bilaabi karaan inay isdiiwaan geliyaan xarumaha soo socda ee talaalka COVID-19 berri 3:00 galabnimo. Xarumaha caafimaadka waxaa loo qorsheeyay Talaado, Abriil 6th, iyo Khamiista, Abriil 8th Xarunta Siouxland Expo Center. Balanqaadyadu waxay u furnaan doonaan dhammaan dadka deegaanka ee jira da'da 16 iyo wixii ka weyn ee u baahan qiyaasta ugu horreysa ee tallaalka. Xarumaha caafimaadku waxay isticmaali doonaan tallaalka Pfizer.
Somali News: 03.26.2021
By Halima Osman • Mar 26, 2021
Somali News 03.25.2021
By Halima Osman • Mar 25, 2021
Waaxda Caafimaadka ee Dakota Dakota maanta waxay soo warineysaa inay hadda jiraan laba nooc oo cusub oo COVID-19 ah oo gobolka ah, iyo sidoo kale kordhinta tirada noocyada U.K. Gobolka ayaa sidoo kale soo sheegay seddex dhimasho oo dheeraad ah oo COVID-19 ah maanta iyo sidoo kale 254 infekshanno cusub oo wanaagsan.